सरकारले ‘थाहै नपाई’ कसरी भयो रुसबाट कोभिड-१९ को खोप ल्याउने सम्झौता ? के भन्छ कम्पनी ?:: Naya Nepal
सरकारले ‘थाहै नपाई’ कसरी भयो रुसबाट कोभिड-१९ को खोप ल्याउने सम्झौता ? के भन्छ कम्पनी ?
मङ्गलवार आएको समाचारबारे भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपाल सरकारले नभनी खोपहरू भित्र्याउन नमिल्ने बताए। उनी भन्छन्, “यसबारे हामीलाई थाहा छैन। नेपाल सरकारले नभनी ल्याउन मिल्दैन। बाहिर क-कसले के-के सम्झौता गर्छन् त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ?”
स्पुत्निक ल्याउने सहमतिबारे के छ प्रतिक्रिया ?
खोपलगायत विभिन्न औषधिहरू नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने जिम्मेवारी पाएको औ’षधि व्यवस्था विभागले सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित नभईकन कोभिड-१९ विरुद्धको खोपलाई नेपाल ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।
तर पछिल्लो समयमा रुसी खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए। उनी भन्छन्, “अहिले तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणको अवस्थामा रहेको उक्त खोप परीक्षणबाहेक अन्य कुरामा झिकाउन मिल्दैन। कुनै एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग कुरा गर्न सक्छ तर नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिई खोपहरू ल्याउने अवस्था देख्दिनँ।”
कस्तो सम्झौता भएको हो ?
सम्झौता गरेको कम्पनी के भन्छ ?
उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारसँग कुरा गर्नलाई यो विषय परिपक्व भइसकेको छैन। खोप सफल भइसकेको जब दस्तावेज आउँछ, त्यसपछि मात्रै त्यसपछि मात्रै हामी औ’षधि व्यवस्था विभागमा जान्छौँ।”
उक्त प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हो। अहिले हाम्रो माग यति छ भनेर हामीले भनेका हौँ। भोलिका दिनमा खोप बनेर उत्पादन हुने अवस्था आयो र त्यसपछि हामीले मगाउनुपर्‍यो भने हामी पछि पर्छौँ भनेर अहिले नै सहमति गरेको हो।” उनले उक्त खोप सफल भए त्यसलाई व्यवसायको हिसाबले नेपालमा विक्री गर्न मिल्नेगरी आफूहरूले बाटो खोल्न खोजेको बताए।
सिनेमाघर खुले पनि रिलिज नहुने भयो बहुप्रतिक्षित ‘सूर्यवंशी’
भारतमा कोभिड १९ महामारीले बन्द रहेका सिनेमा हल १५ अक्टोबर अर्थात अबको १२ दिनपछि खुल्दै छन्। फिल्महरु ब्याक टु ब्याक प्रदर्शनको लाइनमा छन्।
हलको प्रतिक्षामा रहेको एक फिल्म हो, सूर्यवंशी। रिलिजको मुखैमा लकडाउनले हल बन्द भएपछि सूर्यवंशी अनलाइन प्ल्याटफर्ममा रिलिज भएन। निर्माता हलमै रिलिज गर्ने योजनामा रहे। हल खुले दिपावलीमा रिलिज गर्ने सोंच थियो।
अब हल खुले पनि तत्कालै यो फिल्म प्रदर्शन नहुने भएको छ।
केन्द्र सरकारबाट फिल्म हल खोलिए पनि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश जस्ता राज्य अझै पनि सिनेमाघर खोल्ने पक्षमा छैनन्। मुख्य राज्यमै फिल्म प्रदर्शन नहुने भएपछि रिलिज गरेको फाइदा नहुने निर्माताको बुझाई छ।
निर्माताले अब सूर्यवंशीलाई डिसेम्बरमा रिलिज गर्ने सोंच बनाएका छन्। त्यतिबेला सबैतिर हल खुलिसक्ने उनीहरुको आंकलन छ। कोरोनाले निम्त्याउन सक्ने अनिश्चित अवस्थाका कारण फिल्म युनिट कुनै निर्णय नलिएर हेर र पर्खको रणनीतिमा छ।
स्टार अभिनेता अक्षय कुमार र कट्रिना कैफ को मुख्य अभिनय रहेको फिल्म मुम्बईका प्रहरी अफिसरको कथामा आधारित छ। फिल्ममा अजय देवगन र रणवीर सिंह पनि सानो भूमिकामा छन्।